कहाँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गर्दैछन् शीर्ष नेता ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
कहाँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गर्दैछन् शीर्ष नेता ?
२७ भदौ, काठमाडौं ।
कांग्रेस शीर्ष नेताले पुराना क्षेत्र नछाड्ने
कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थालेका छन् । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरूले खुलेर निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गरेका छैनन् । आफूहरूले लड्दै आएको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रमै फेरि पनि निर्वाचन लड्ने कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले मनस्थिति बनाएका छन् । परम्परागत क्षेत्र रहेकै ठाउँबाट निर्वाचन लड्दा बढी सुरक्षित र सहज हुने बुझाइपछि उनीहरूले परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र नै रोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन डडेल्धुराबाट लड्दै आएका छन् । उनी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा डडेल्धुरा र कैलाली ६ बाट विजयी बने । उपचुनावका लागि देउवाले कैलाली ६ छोडेर डडेल्धुरा नै रोजे । देउवाले यसपटक कहाँबाट निर्वाचन लड्ने भन्ने घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर, एक ठाउँबाट मात्र निर्वाचन लड्न पाउने हुँदा उनले फेरि पनि डडेल्धुरा नै रोज्ने मनस्थिति बनाएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह काठमाडौं १, कृष्ण सिटौला झापा ३, डा. शेखर कोइराला मोरङ ७, विमलेन्द्र निधि धनुषा ३, अर्जुननरसिंह केसी नुवाकोट १, डा. रामशरण महत नुवाकोट ३, गगन थापा काठमाडौं ४ बाट निर्वाचन लडेर निर्वाचन जितेका थिए ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ललितपुर ३ बाट निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरेकी छन् । उनी यसअघि पनि ललितपुरबाटै निर्वाचन लड्दै आएकी छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भुसाल ललितपुर ३ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा आबद्ध थिइन् । वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले भुसाल निर्वाचन लड्न पाइनन् ।
Previousजग्गा खरिद प्रकरण: पूर्वमन्त्री देखि वडा सचिवसम्मको मिलेमतो
Nextजम्बो मन्त्रिपरिषद्: मन्त्रीलाई तलब खुवाउनै हम्मे